विचार – Karnalitimes
सबै व्यवसायीलाई समावेश गरी सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघलाई साझा बनाउन मेरो उम्मेदवारी: हर्षविक्रम खड्का
भिडियो अन्तर्वार्ताः सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको छ। २०७९ वैशाख ४ गते संघको निर्वाचन तोकिएको छ। नयाँ कार्यसमितिको लागि दुईवटा समूह निर्वाचनमा सहभागी भएका छन्। एक समूह नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समीकरणअनुसार अगाडि बढेको छ। नेपाली काँग्रेस निकट व्यवसायीहरुको अर्को समूह यो समिकरणमा बनेको समूहको प्रतिस्पर्धीका
कोरोना कहरमा प्रेस स्वतन्त्रा र पेशागत सुरक्षाको सवाल
कोरोना महामारीको कारण कति पत्रकारको जागिर गुम्यो ? यो प्रश्नको अंकगणितीय जवाफ पाउन मुस्किल छ । तर नेपाल पत्रकार महासंघले २०७७ चैतदेखि सुरु भएको लकडाउनको कारण देशभर झण्डै ८ सय पत्रिका बन्द भएका विवरण संकलन गरेको थियो । संभवतः माथिको प्रश्नको अनुमानित जवाफ यस आकडाबाट पाउन सकिन्छ । नेपालमा नयाँ ‘भेरियन्ट’ (संस्करण) सहित कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फेरि सुरु भएको छ । लामो समयको लकडाउन र सुरुवाती चर
शोकाकुल गाउँ, न्यास्रो घर
निमायल गाउँ सुर्खेत । यही साताको बुधवार अछामबाट चार जनाको शव ल्याउने कुरा थियो । कर्णाली नदीको छेउमा रहेको कर्णाली राजमार्गको माथिल्लो भित्तामा ८ वटा बाँस ठाडो पारेर लहरै राखिएका थिए । नजिकै बसेका आफन्तहरुको आँखाका कुनाकुनामा आँशु अडिएका थिए । केही सयममै ती आँशुका थोपाहरु उनीहरुका गालामै हाम फाल्ने तरखरमा थिए । जसरी सुकी बडुवालले आफ्ना चार सन्तानसहित कर्णाली नदीमा हाम फालेकी थिईन् । अछामको मं
किन चुँडिन्छन् मुनाहरु ?
हामी उभिएको समाज नर–नारीकोे धरातलमा आधारित छ । श्रृष्टि चलाउनका लागि महिला र पुरुषको बराबर भूमिका रहेको छ । तर आधा धर्ति ओगटेका बालिका/महिलामाथि निकै अन्याय र अत्याचार भइरहेको हामी देख्छौं । विश्व २१ औं शताब्दिको संघारमा आइपुगे पनि नेपाली मुना (बालिका) हरु चु“डिएका छन् । बलात्कार, बेचविखनजस्ता अपराधका सिकार भइरहेका छन् । मानव सम्मानित रुपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मानव अधिकार
काेराेना कहर : निरीह सरकार
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण विश्व यतिबेला आक्रान्त छ । विश्वले अहिले आर्थिक तथा स्वास्थ्य संकट एकै पटक सामना गरिरहेको छ । कोरोनाका कारण नेपालमा पनि आर्थिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित छन् । यसले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । दिन प्रतिदिन अवस्था जटिल बन्दै गइरहेको छ । लाखौंको संख्यामा नागरिकहरुले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । समय परिस्थिति अनुसार नयाँनया
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र अहिलेको अवस्था
प्रेम ढुंगाना ‘प्रभात’ नेपाल सर्वहारा श्रमजिवि जनताको प्रतिनिधि ,सामन्तवात दलाल, नोकर शाही, पुजीवादी तथा साम्राज्यवादका शोषण उत्पीडिनबाट नेपाली जनता तथा नेपाल राष्ट्रलाई मुक्त गर्न र जनताको बहुदलीय जनवाद, समाजवादको स्थापनाद्धारा न्यायपुर्ण समानतायुक्त र समृद्ध नेपाल स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना २०६ साल बैशाख १० गते भारतको पश्चिम बङगाल राज्यको कलकत्तामा कमरेड पुष्प
यसरी खोल्न सकिन्छ विद्यालय
यदुप्रसाद ज्ञवाली यस शैक्षिक सत्रमा विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू कोभिड–१९ को कारणले गर्दा बन्द रहेका छन्, जसले गर्दा विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उन्नयन प्रायः निरुन्साहित भएको छ । मानसिक प्रभावले सबै शैक्षिक सम्भावनाहरू सफल नभएको अवस्थामा अबको अवस्थामा के गर्ने भन्ने बारेमा सबैतिर चर्चा भएको छ । तर कुनै निश्चित संचालनको नमुना स्थापित हुन सकेको छैन । केही बैकल्पिक विधिहरू संचालनको लागि आंशिक स
मुख्यमन्त्री परिवर्तनकाे ताताे बहसमा प्रधानमन्त्री ओलीले खन्याए चिसाे पानी
सुर्खेत । केही दिनयता सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन मिडियामा समेत मुख्यमन्त्री परिवर्तन बहसको विषय बनेको थियो । विशेषगरी कर्णालीमा यो विषय तातो बहस बनेको थियो । सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्री परिवर्तन नहुने अभिव्यक्ति दिएर कर्णालीमा समेत चलेको तातो बहसमा एकाएक चिसो पानी खन्याइदिएका छन् । शनिबार साँझ प्राइम टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक
कोरोना जोखिमको मुखैमा कर्णाली, बचाउने कसरी ?
देवेन्द्रकुमार सेजुवाल विश्व यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण आक्रान्त छ । नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरु भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशजस्ता बढी जनसंख्या भएका मुलुकहरुमा पनि संक्रमितको संख्या अत्यधिक दरमा बढिरहेको छ । यसको प्रभाव नेपालमा, अझ भनौं कर्णाली प्रदेशमा नपर्ने कुरै भएन । विशेषगरी भारतसँगको खुला नाका र रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका नागरिकहरु असुरक्षित किसिमले फिर्ता भएक
कर्णाली प्रदेश जन्माउँदाको कथा (पुस्तक अंश)
पदमबहादुर शाही (संयोजक, प्रादेशिक आन्दोलन संघर्ष समिति) नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलोपटक २०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन भयो । तर उक्त संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रियाले गति लियो । नयाँ संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटिल मध्येको एक मुद्दा थियो– राज्य पुनर्संरचनामार्फत संघीयता घोषणा । संघीयतासँगै दे